﻿ ‘उज्वल सहकारी संस्था उपभोक्ता पसल सञ्चालनको तयारीमा’
‘उज्वल सहकारी संस्था उपभोक्ता पसल सञ्चालनको तयारीमा’
बुधबार २८, असोज २०७७
२०६६ साल बैशाख ३१ गते स्थापना भएको रामधुनि नगरपालिका–५ स्थित उज्वल सहकारी संस्थामा करिब ७ सय २६ जना शेयर सदस्यहरु छन् । यो सहकारी रामधुनी नगरपालिका तत्कालिन भाषी गाविसको एक मात्र उपभोक्ता सहकारी संस्था हो । आउनुहोस् हेरौं सहरकारीको विषयमा न्युजलयका लागि ज्योति पोखरेलले सहकारीका व्यवस्थापक चरस निरौलासंग गरेको कुराकानी :
सहकारीको स्थापना कहिले भएको थियो ?
हाम्रो सहकारीको स्थापना २०६६ साल बैशाख ३१ गतेका दिन भएको हो । नेपाल सरकारले गाउँगाउँमा सहकारी घरघरमा भकारी भन्ने कार्यक्रम ल्याएको थियो । त्यसै अन्तर्गत प्रत्येक गाविसलाई एउटा सहकारी दिने योजना अनुरुप तत्कालिन भाषी गाविसले पनि एउटा सहकारी दर्ता गराएको थियो । जुन उज्वल उपभोक्ता सहकारी संस्था हो । यो सहकारी संस्था हालको रामधुनी नगरपालिका तत्कालिन भाषी गाविसको एक मात्र उपभोक्ता सहकारी संस्था हो ।
कति जना शेयर सदस्यबाट स्थापना गरिएको र हाल कति हुनुहुन्छ ?
सुरुवातको चरण लगभग २ सय शेयर सदस्यहरु हुनुहुन्थ्यो । अहिले करिब ७ सय २६ जना शेयर सदस्यहरु हुनुहुन्छ ।
सुरुवातको समयमा के कस्ता चुनौतीहरु आए ? अहिले कस्तो छ ?
सुरुवातको समयमा धेरै चुनौतीहरु आए, किनभने उपभोक्ता सहकारी भएकाले उपभोक्ता पसलबाट सञ्चालन हुँदै आयो । व्यवस्थित रुपमा लेखाङ्कन गर्ने कुरा चुनौतीको रुपमा आएको थियो । त्यसपछि स्वफ्टवेयर प्रणाली नहुँदा हातैले लेख्नुपर्ने, थोरै पुँजी (२५ हजार शेयर पुँजी र जम्मा एक लाख एघार हजारको अख्तियारी) जस्ता धेरै नै चुनौतीहरु थिए । एक समय त लगभग बिलाएर जान्छ कि जस्तो अवस्था थियो । पछिल्लो समय झुम्काका साथीहरु, यहाँका सम्वद्ध व्यक्तिहरुले चासो दिएर यसलाई कुनै राजनैतिक पार्टीको मात्रै सहकारी नभएर समग्र झुम्काबासीको सहकारी बनाउनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले झुम्काका उर्जाशिल युवाहरुलाई समेटेर सामूहिक रुपमा २०७१ साल बैशाख १७ गते हामीले नहरपारी कार्यलय खडा गर्यौं । त्यसपछि विभिन्न समस्याहरुलाई व्यवस्थापन गर्दै यहाँ सम्म ल्याइ पुर्याएका छौं ।
कति जना कर्मचारीहरु हुनुहुन्छ ?
एक जना पुरुष कर्मचारी म छु । अन्य ३ जना महिला कर्मचारीहरु हुनुहुन्छ ।
यस सहकारी संस्थाबाट विगतको समयमा के कस्ता कार्यक्रमहरु भए ?
विगतको समयमा यस सहकारी संस्था मार्फत विभिन्न किसिमका कार्यक्रमहरु भएका छन् । जस्तैः हाम्रो छाता संगठनमा आवद्ध रहेर संगठनलाई सघाउने कामहरु भएका छन् । रामधुनी नगरपालिकाको आसपासमा सरसफाईको कार्यक्रमहरु देखि लिएर उपभोक्ताहरुलाई तालिम दिने, सहकारी सम्बन्धि तालिम, विभिन्न जनचेतामुलक कार्यक्रमहरुमा पनि सहयोगीको भूमिका खेल्दै आएका छौं ।
को बाट प्रेरित भएर सहकारी सञ्चालनमा लाग्नु भयो ?
यो सहकारी सञ्चालनको सुरुवाती चरणमा राज्यले गाउँगाउँमा सहकारी घरघरमा भकारी भन्ने कार्यक्रम ल्यायो, सोही कार्यक्रम अन्तर्गत प्रत्येक गाविसलाई एक लाख रुपैया बिउँ पुँजीको रुपमा दिने सरकारी घोषणा थियो । त्यही बिउँ पुँजीको आसमा सहकारी दर्ता गरिएको हो । तर चलाउन धेरै चुनौती देखियो । अझै पनि धेरै चुनौतीहरु छन् । हामी पनि योजना तर्जुमाकै चरणमा छौं ।
सहकारी संस्थाको विकासको अवस्था कस्तो छ ?
सहकारीको अवस्था अहिले ढुलमुले प्रकृतिको रहेको छ । सहकारीमा आवद्ध रहेको समूह धेरै भएता पनि राज्यको स्पष्ट नीति नभएको कारण, सहकारीलाई व्यवस्थापन गर्ने कुरामा कमजोरी हुँदा त्यस्तो समस्या आएको हो । तथापी राज्यले आर्थिक ऐनहरु ल्याएर यसलाई वयवस्थापन गर्न खोजिरहेको अवस्था छ ।
अहिलेसम्म कति बचत संकलन भए ?
हाम्रो आजको मिति सम्मको बचत हेर्ने हो भने बचतमा १ करोड १५ लाख १६ हजार ३३ रुपैयाँ र शेयरमा ४८ लाख ८१ हजार रहेको छ ।
सहकारीको व्यवस्थापन अवस्था कस्तो छ ?
बजार प्रतिस्पर्धात्मक छ । त्यसपछि ऋण लगानी नीतिहरु बनाउनको लागि नगरपालिकाले ऋण व्यवस्थापनको लागि ऋण सुचना केन्द्र स्थापना गरिने भनेर नेपाल अधिराज्यभरी यो आवाज उठी रहेको छ । तरपनि व्यवस्थापनको लागि स्थानीय नियकाय तथा राज्य संयन्त्रको उचित व्यवस्थापन भएको छैन । यो पनि सहकारी विकासको लागि चुनौपूर्ण कुरा हो । राज्यको नीति नै प्रत्येक सहकारीलाई उद्यमशिलतामा जोड दिने आएको छ । यो प्रक्रिया चाँडै भईदियो भने सहकारीको अझै व्यवस्थापन हुनेथ्यो ।
सहकारी विकासको लागि को बाट के आशा राख्नु हुन्छ ?
सहकारी विकासको लागि सर्वप्रथम त नेपाल सरकारले सहकारीलाई व्यवस्थापनको लागि उचित ऐन, नियम, कानुनहरु ल्याएर व्यवस्थित गर्नु पर्यो । अनि कसले के काम गर्छ भन्दा पनि कुन सहकारीले के काम गरिरहेको छ र के काम गर्न सक्छ भनेर उनीहरुलाई उचित तालिम दिएर प्रत्यक्ष रुपमा जनता सँग जोड्ने हो भने सहकारी जत्तिको विकास हुने अरु क्षेत्र मैले देखेको छैन ।
यस सहकारीको आगामी योजनाहरु के–के रहेका छन् ?
हाम्रो योजनाहरुमध्ये उपभोक्ता सम्बन्धि पसल गर्न लागेका छौं । यसमा भर्खरै मात्र सञ्चालक समिति र पसल व्यवस्थापन समितिको निर्णय अनुसार रामधुनी नगरपालिका क्षेत्रलाई ओगट्ने गरेर एउटा ग्यास डिपोको रुपमा यहाँ स्थापना गर्ने र ९ वटै वडाहरुमा यो डिपो मार्फत यसका सब ब्रान्चहरु राखेर काम गर्ने तत्कालिन योजना छ । भविष्यमा कृषि क्षेत्र अन्तर्गत बाख्रा पालन, पशुपालनका कुराहरुमा पनि जोड दिएर त्यसलाई व्यवस्थित रुपमा विकास गर्ने उद्देश्यका साथ अघि बढ्ने योजना छ ।
आउँदै गरेको वडा दसैं तथा दिपावलीको अवसरमा सम्पूर्ण शेयर सदस्य, बचतकर्ताहरुमा शुभकामना दिन चाहन्छु । त्यसका साथै कोभिड–१९ को प्रभाव बढीरहेको अवस्था छ । यसबाट पनि सुरक्षित हुँदै दसै मनाउँदै सहकारी सँग सहकार्य गर्दै आउनु हुनेछ भन्ने अपेक्षा राखेको छु ।